जब साझाका अध्यक्ष नै किर्ते काम गर्छन् « Pahilo News
जब साझाका अध्यक्ष नै किर्ते काम गर्छन्
प्रकाशित मिति : 10 May, 2017 12:09 pm
२७ वैशाख । साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको किर्ते काम फेरि उदांगिएको छ । साझाको सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय नै नभएको कुरालाई निर्णय भएको भनी उनले ढाँट–छल गरेपछि सञ्चालकहरु नै उनीप्रति आजित बन्न थालेका छन् ।
गत वैशाख १९ गते महाप्रबन्धक शर्माले साझाको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका थिए । सो दिनको बैठकमा मनोनीत सञ्चालकहरुमध्ये प्रदीप नेपाल र डा. कृष्णहरि बराल काठमाडौंमै भए पनि उपस्थित भएनन् भने दीनानाथ शर्मा बागलुङ गएका हुँदा उनी पनि उपस्थित हुन सकेनन् । सो बैठकमा सञ्चालकहरु विजय सुब्बा, जीवनचन्द्र कोइराला र हरिहर खनाल एवं आमन्त्रित सञ्चालक देवी गौतम उपस्थित थिए । साझाको नियमावलीअनुरुप बोर्डको कोरम पुग्न ५ जना सदस्य अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ र आमन्त्रित सदस्य उपस्थित भए पनि कोरम पुगेको मानिँदैन । सो दिनको बैठकमा कोरम नपुगेपछि केही निर्णय हुन सकेन ।
निर्णय नभएर के भो र ? त्यसकै भोलिपल्ट महाप्रबन्धक शर्मालाई किर्ते काम गर्न कसैले पनि रोक्न सकेन । उनले साझाको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत सहायक द्वितीय किरण खनाललाई एउटा पत्र काटे । सो पत्रमा यस्तो बेहोरा लेखिएको छ, ‘साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिको मिति २०७३÷९÷९ को निर्णयानुसार संस्थाको मिति २०७३÷९÷१ च.नं. ३४८÷०७३÷०७४ को सूचनाअनुसार २० वर्ष सेवा अवधि पुगी निर्धारित म्याद –मिति २०७३÷९÷१४ च.नं. ४०७ को समयावधि थप सूचना समेत) २०७३ पुस २२ गतेभित्र स्वेच्छिक राजीनामा नदिने कर्मचारीलाई साझा प्रकाशन कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०७३ को (संशोधनसहित) बमोजिमको सुविधा मात्र पाउने तर थप ३ महिनाको तलब एकमुष्ट नपाउने गरी साझा प्रकाशन कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०७३ (संशोधन) को परिच्छेद ११ को नियम ५९ को ५९.४ अनुसार मिति २०७३÷१०÷१ देखि लागु हुने गरी अवकास दिने निर्णय भएकाले संस्थाको मिति २०७३÷९÷२४ च.नं. ४७४÷०७३÷०७४ को पत्रानुसार संस्थाको सेवाबाट अवकास दिएकोमा सो उपर तपाईले मिति २०७३÷१०÷२३ मा दिनुभएको नोकरी कार्यसम्बन्धी पुनरावेदन निवेदन सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश हुँदा मिति २०७४÷१÷१९ को सञ्चालक समितिको बैठकबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
तर, वैशाख १९ गते संस्थाको बैठक बसेर खनालको पुनरावेदन निवेदन अस्वीकृत गरेको पत्र महाप्रबन्धक शर्माले खनाललाई दिए पनि सो दिन बैठक नै नबसेको र कुनै निर्णय नै नभएको सञ्चालकहरुले बताएका छन् । सञ्चालक जीवनचन्द्र कोइराला भन्छन्, ‘हामी त्यस दिन जम्मा त भएका हौं तर कोरम नपुगेको हुँदा कुनै निर्णय भने भएको छैन । दीनानाथजी बागलुङ जानुभएको र प्रदीपजी पनि नआउनुभएको हुँदा बैठक बस्न सकेन ।’